Orinasa mpanamboatra rano fisitrihana rano any China | Dingtaisheng
Fitsinjarana rano mikoriana:
Amin'ny alàlan'ny fanovana ny làlan-kizoran'ny rano ao amin'ny sambo retort, ny fikorianan'ny rano fanamiana dia tratra amin'ny toerana rehetra amin'ny torolàlana mitsangana sy mitsivalana. Rafitra mety indrindra hanaparitahana ny rano eo afovoan'ny fitoeram-bokatra tsirairay hahatratrarana ny fanamorana sterilization nefa tsy misy faran'ny maty.
Fitsaboana fotoana fohy amin'ny hafanana ambony:
Ny fanamafisana ny fotoana fohy amin'ny hafanana avo lenta dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fanafanana rano mafana amin'ny fitoeran-drano mafana mialoha sy ny hafanana avy amin'ny hafanana avo mba hamonoana.
Mety amin'ny kaontenera malemy endrika:
Satria manana ny buoyancy ny rano, dia afaka mamorona vokany miaro tena tsara amin'ny fitoeran-javatra ambanin'ny mari-pana ambony.
Mety amin'ny fikarakarana sakafo am-bifotsy am-bifotsy:
Sarotra ny manafana sy manaparitaka ny tapany afovoan'ny sakafo am-bifotsy ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny alàlan'ny fampiasana retort mijanona, indrindra ho an'ireo sakafo manana viscosity avo.
Amin'ny fihodinana, ny sakafo viscosity avo dia azo hafanaina afovoany ao afovoany ao anatin'ny fotoana fohy, ary hahatratra ny vokatra sterilization mahomby. Ny fahaizan'ny rano amin'ny hafanana ambony dia mitana andraikitra amin'ny fiarovana ny fonosana vokatra mandritra ny fizotran'ny fihodinana.
Tany am-piandohana, ny rano maripana avo avy amin'ny fitoeran-drano mafana dia atsofoka ao anaty sambo. Rehefa afangaro amin'ny vokatra ny rano mafana dia mivezivezy tsy tapaka amin'ny alàlan'ny paompy mikoriana be sy ny fantsom-pizarana rano mizara siantifika. Ny etona dia atsindrona amin'ny alàlan'ny mixer etona ao anaty mba hanamafisana sy hamonoana ny vokatra.
Ny fitaovana famindrana rano mikoriana ho an'ny sambo retort dia mahatratra ny onja mitambatra amin'ny toerana rehetra amin'ny torolàlana mitsangana sy mitsivalana amin'ny alàlan'ny famindrana ny làlan-kizorana ao anaty sambo, mba hahatrarana fizarana hafanana tena tsara.
Mandritra ny fizotrany iray manontolo, ny tsindry ao anaty sambo retort dia fehezin'ny programa handrindrana na hamoahana rivotra amin'ny alàlan'ny valves mandeha ho azy ao amin'ilay sambo. Koa satria fanamafisam-peo anaty rano izy io, ny tsindry ao anaty sambo dia tsy misy fiantraikany amin'ny hafanana, ary ny tsindry dia azo apetraka arakaraka ny fonosana samihafa amin'ny vokatra samy hafa, mahatonga ny rafitra ho azo ampiharina bebe kokoa （3 tapa-kazo afaka, 2 siny afaka, fonosana malefaka, fonosana plastika sns .).
Amin'ny dingana mangatsiaka dia azo fidina ny fanarenana sy ny fanoloana rano mafana hanarenana ny rano mafana voadidy ho an'ny tanky mafana, ka hitsitsy angovo hafanana.
Rehefa vita ny fizotrany dia hisy fambara fanairana. Sokafy ny varavarana ary esory, avy eo miomana amin'ny andiany manaraka.
Ny fitoviana amin'ny fizarana mari-pana ao anaty sambo dia ± 0,5 ℃, ary ny tsindry dia voafehy amin'ny 0,05 Bar.
Tavoahangy plastika vilia baolina / kapoaka
Fonosana malefaka lehibe Fonosy fonosana casing
Ronono: vifotsy, tavoahangy plastika, vilia / kaopy, tavoahangy fitaratra / tavoara, fonosana paosy malefaka
Hena fonosana azo henoina, akoho amam-borona, saosisy
Trondro fonosana malefaka lehibe azo amboarina, hazan-dranomasina
Fonosana lehibe malefaka refy vonona hihinana sakafo
Previous: Ny valiny hafafin'ny sisiny
Manaraka: Direct Steam Retort
Rano fanitrihana rano mandeha ho azy
Rano fisitrika rano tsy misy vy
Sterilizer Retort amin'ny fisitrihana rano